စကျတငျဘာ 5, 2018 – Healthy Life Journal
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ခရီးတွေသွားတဲ့အခါ၊ အထူးသဖြင့် ဘုရားဖူးခရီးဆိုရင် ရောက်တဲ့ မြို့တိုင်းမှာ ကျွန်မအကျင့်က “တောင်းစားတဲ့သူရှိသလား”ဆိုတာကို အမြဲ အကဲခတ်မိတယ်။ ပုပ္ပား၊ ပုဂံ၊ တောင်ငူ၊ မော်လမြိုင်၊ မုဒုံ၊ ကျိုက်မရော၊ ကျိုက္ခမီ စတဲ့ဒေသတွေက ဘုရားဝန်းတွေထဲမှာ...
တစ်ရက် ဆန်ပြုတ်နှစ်ခါသောက်သုံးခြင်းက အသက်ရှည်ခြင်း၏ လျှို့ဝှက်ချက်ဟု ကမ္ဘာ့အသက်အရှည်ဆုံးမိသားစု ဆို
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ မြောက်အိုင်ယာလန်မှ စုစုပေါင်းအသက် ၁၀၇၅နှစ်ရှိတဲ့ တရားဝင်ကမ္ဘာ့အသက်အရှည်ဆုံး ဒွန်နယ်လ်မိသားစုက ဆန်ပြုတ်သောက်တာဟာ အသက်ရှည်စေတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ မိသားစု မောင်နှမ ၁၃ ယောက်ဟာ ခြံထွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ၀က်ပေါက်ခြောက်၊ ကြက်ဥစတဲ့ ဒေသထွက်အစားအစာတွေစားသုံးရင်း ယာခင်းတွေ...
သစ်သီးသုံးရုံနဲ့ ပိုလှလာစေမယ့် အိမ်တွင်းနည်းတွေ . . .
သံပယိုသီး၊ နာနတ်သီး၊ စတော်ဘယ်ရီသီး၊ ပန်းသီးတွေမှာပါတဲ့ ဓာတ်တွေက အသားအရေ အပြစ်အနာအဆာတွေကို ပြုပြင်ပေးနိုင်ပြီး သင့်ကို ပိုလှလာအောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ တံတောင်ဆစ်ဖြူစေခြင်း သံပယိုသီးကို ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး လက်တံတောင်ဆစ်မှာ ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ လက်တံတောင်ဆစ်မည်းနေတာတွေ ပြေလျော့စေပြီး ဖြူစင်စေပါတယ်။ သက်ကြီးအစက်အပြောက် မှိန်ဖျော့စေခြင်း သံပယိုသီးက...
ဆီးကျောက်မတည်စေရန် ကာကွယ်ပါ . . .
ကျောက်ကပ်မှာကျောက်မတည်စေဖို့ နေ့စဉ် စားသောက်မှုပုံစံမှာ ဆင်ခြင်သင့်တာလေးတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အနီရောင်အသားနှင့် ကလီစာများလျှော့စားပါ ၀မ်းတွင်း ကလီစာတွေ၊ အနီရောင်အသား (ဥပမာ အမဲသား၊ ဆိတ်သား)၊ မြေအောင်းဥ စတာတွေကို လျှော့စားပါ။ အရည်တို့ကို ဆင်ခြင်သောက်သုံးပါ အရက်၊ ဘီယာ၊ ကွမ်းစားတာကို တတ်နိုင်သမျှ...
– စူး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဦးနှောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အောက်ပါအခြေအ နေတွေ ဖြစ်နေပါက ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။ (၁) ဦးခေါင်းထိခိုက်မှုဖြစ်ခြင်း ဦးခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး သတိ မလစ်ပေမယ့် ဒါက ပြင်းထန်တဲ့ ဦးနှောက်ထိခိုက်မှု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ထိခိုက်မှု အတိုင်းအဆကို သိနိုင်ဖို့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ...